Diyaaradda Montenegro ayaa wadahadal cusub la bilowday Etihad
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Newsletter » Diyaaradda Montenegro ayaa wadahadal cusub la bilowday Etihad
Shirkadda dayuuradaha ee Montenegro, oo sanadkan lagu daray liiska shirkadaha gaarka loo leeyahay, ayaa isha ku haysa inay xidhiidh dhow la yeelato Etihad Airways, waxaanay dhawaan wada-hadallo cusub la bilowday shirkadda diyaaradaha ee Imaaraatka.
Shirkadda dayuuradaha ee Montenegro, oo sanadkan lagu daray liiska shirkadaha gaarka loo leeyahay, ayaa isha ku haysa inay xidhiidh dhow la yeelato Etihad Airways, waxaanay dhawaan wada-hadallo cusub la bilowday shirkadda diyaaradaha ee Imaaraatka. Warkan ayaa imaanaya ku dhawaad ​​hal sano kadib markii Ra’iisul wasaare ku xigeenka Montenegro ahna wasiirka arrimaha dibadda Igor Lukšić uu sheegay in Etihad ay ka fikireyso in ay saami ku yeelato shirkadda duulimaadyada qaranka ee dalka.
Sida laga soo xigtay wargeyska "Pobjeda" ee ay dowladdu leedahay, labada shirkadood ayaa hadda raadinaya inay soo gabagabeeyaan heshiiska iskaashiga codeshare iyo kor u qaadida iskaashiga, iyadoo wadahadalo dhawaan lagu qabtay Abu Dhabi.
Ku lug lahaanshaha madaxweyne ku xigeenka Serbia ee iskaashiga Imaaraadka, Mladjan Dinkić, oo hogaaminaya wadahadalada labada dhinac ayaa dhaliyay dareen weyn. Mr. Dinkić, oo sidoo kale ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda Serbia, ayaa door muhiim ah ka qaatay la wareegitaanka Etihad ee Jat Airways, taasoo markii dambe dib loogu soo celiyay Air Serbia.
Sannadkii hore, Mr. Lukšić iyo madaxa shirkadda Etihad Airways, James Hogan, ayaa ku kulmay Abu Dhabi ka dib wasiirku wuxuu sheegay in shirkadda xambaara Imaaraadku ay dhamaystiri doonto hannaanka baadhista ee shirkadda dayuuradaha ee Montenegrin. "Waxaan la samaynay heshiis qeexan koox ka socota Etihad Airways inay booqdaan Montenegro si ay u qeexaan moodooyinka iskaashiga iyo iskaashiga ka dhexeeya Etihad Airways iyo Montenegro Airlines", Mr. Lukšić ayaa sidaas yidhi. Shirkadda dayuuradaha ee Montenegro waxa sanadkii la soo dhaafay la kulmay tartan xooggan oo ka socday labada suuq ee Serbia iyo Russia – kuwaas oo 62.8% ka ahaa dhammaan rakaabkii ay qaaday sannadkii hore. Shirkaddu waxa ay gacanta ku dhigtay ilaa 557.000 oo safar ah sannadkii 2014-kii, hoos u dhac 5.3% ah sannadkii ka hor waxa ay hoos u dhigtay hawlaheeda duulimaadka 20%. Si kastaba ha ahaatee, shirkadda dayuuradaha ee Montenegro ayaa sheegtay in ay ka soo horjeedo tartamayaasheeda, "Tartan xooggan labadii sano ee la soo dhaafay kuma suurtagelin in uu halis geliyo mawqifka Montenegro Airlines oo ah mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee ugu saacadaha badan gobolka", ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.
Horaantii bishaan, Golaha Maalgashiga Caasimada iyo Gaarka loo leeyahay ee Montenegrin ayaa ku dhawaaqay qorshayaal ay ku doonayaan in ay shirkada dayuuradaha ee Montenegro ka dhigaan kuwo gaar loo leeyahay sanadkan. Wasaaradda Gaadiidka iyo Baddaha ayaa soo bandhigtay in laga iibiyo saamiga laga tirada badan yahay ee shirkadda diyaaradaha, taas oo la doonayo in la siiyo maalgashadayaasha mustaqbalka iyada oo loo marayo qandaraas caalami ah. Labada isku day ee lagu doonayey in lagu wareejiyo shirkaduhu waa hore waa ay ku guuldareysteen, inkastoo Ettihad ay hore u muujisay xiisaha ay u leedahay inay maalgashato Montenegro Airlines. Intii lagu guda jiray isku daygii 2011 gaar-ahaaneed, oo ay dowladdu raadineysay inay iibiso saami dhan 30%, Etihad waxay iibsatay dukumeenti tartanka. Si kastaba ha ahaatee, way ku guul-darraysatay inay soo bandhigto dalab dambe. Etihad Airways waxa ay hadda tirisaa sideed shirkadood oo isbahaysi sinaan ah kuwaas oo ay ku leedahay saamiga lahaanshaha, iyada oo la wareegeysa Darwin Airline, oo dib loogu magac daray Etihad Regional, oo ay wali ansixiyeen masuuliyiinta Swiss.
Hudheelka ay dhistay Quakers si uu ugu adkaysto wakhtiga
Dalxiiska + dhaqanka = aqoonsiga, isla'egta lama huraanka ah
Shinni malabka oo sii yaraanaysa waxay la macno tahay dalagyada miraha oo yaraada
Codsiga cusub ee dawooyinka loogu talagalay daaweynta kansarka qanjirka thyroid